Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Oo soo Gaarey Muqdisho – hareerley News
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti Oo soo Gaarey Muqdisho
Dalka Spain Oo Tirada dhimashada Caabuqa Corona sii kordheysa
Posted on March 21, 2020 March 21, 2020 Author Hareerley News
Waxaa sare u kacay tirada dadka u dhintay cudurka Corona gudaha waddanka Spain oo ay waxay gaartay 1,002 qof, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta dalkaas. Ku dhawaad 20,000 qof ayuu ku dhacay cudurka gudaha Spain halka 1,588 ay ka bogsadeen cudurka. Sidoo kale Koonfur Afrika waxay xaqiijisay in haatan 205 qof uu ku dhacay cudurka Corona. […]
Dowladda Soomaaliya oo lagu eedeyay inay ka gaabisay arrimaha doorashooyinka
Xisbiga Gurmad oo ah mid ka mid ah xisbiyada ka jira Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay ka gaabisay habraacyada lagama maarmaanka u ah qabashada doorashada iyo dhaqan-gelinta doorasho lagu kalsoon yahay oo dhacda xilligii loogu talagalay. Qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa […]
(Daawo):-Buuqa ka taagan Masjidka Quba Ee London UK